Malunga nathi - wintech plastic machinery Co., Ltd.
Iwintech iplastiki yoomatshini Co., ltd.imi kwisiXeko saseDongguan (kwiPhondo laseGuangdong) eTshayina eliyinkampani egxile ekuyileni, ekuphuhliseni nasekuveliseni oomatshini bomatshini wefilimu, i-rewinder ezenzekelayo ye-rewinder kunye ne-slitter, kwimakethi nganye. amagcisa angaphezu kweminyaka engama-20 yamava.
Izimvo zoyilo ezintsha, ukuchaneka kwemveliso, izinto ezinokuthenjwa kunye nenkxaso rhoqo yeetekhnoloji zethu, ukuqinisekisa ukuba abathengi bethu bafumana inkonzo eqinileyo, yexesha elide.
Ezi mpawu zithetha ukuba inkampani yethu iye yaba yinkokeli yentengiso, ngoomatshini be-hi-tech kwihlabathi liphela: ISpain, India, United States, Germany, Canada, Russia, Argentina, Saudi Arabia, Indonesia, South Africa, Mexico, Turkey, Brazil. Isebe lethu lasempuma mpuma lendawo kwi-10 yeRamadan City, e-Egypt, wamkelekile ukunxibelelana nathi ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nemveliso yethu.
ngokufanelekileyo nangobuchule kwihlabathi liphela. I-Wintech ibonelela ngetekhnoloji eyandisa amathuba enkampani yakho kunye nobomi bakho. Ixhaswe ngabasebenzi bayo abancinci, abanamandla kodwa abanamava, inkampani iyakwazi ukuvelisa oomatshini abenzelwe iimfuno ngokweemfuno zabathengi.
I-Wintech Plastic Machinery Co., ltd ehlala kwisiXeko saseDongguan (kwiPhondo lase-Guangdong) e-China eyinkampani egxile ekuyileni, ekuphuhliseni nasekuvezeni oomatshini bomatshini wefilimu, i-rewinder ezenzekelayo ye-rewinder kunye ne-slitter, kwimakethi nganye. kunye nabachwephesha bethu abanamava ngaphezulu kweminyaka engama-20, iWintech Plastic Machinery Co., ltd. ibonelela ngezigqibo kwimarike ebanga izinto kwaye iqinisekisa imveliso ekumgangatho ophezulu wobugcisa.Ukuqhubela phambili kwetekhnoloji kunye nokuzibophelela okwandayo kwenza iWintech Plastic Machinery Co., ltd ukuba sebenza ngokufanelekileyo, ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo kwihlabathi lonke.
I-Wintech ibonelela ngetekhnoloji eyandisa amathuba enkampani yakho kunye nobomi bakho. Ixhaswe ngabasebenzi bayo abancinci, abanamandla kodwa abanamava, inkampani iyakwazi ukuvelisa oomatshini abenziweyo ngokweemfuno zabathengi, inika ingqwalaselo ekhethekileyo kwimveliso yoyilo, izimvo zoyilo, ukuvelisa ngokuchanekileyo, izinto ezinokuthenjwa kunye nenkxaso rhoqo yeetekhnoloji zethu, qinisekisa abathengi bafumana inkonzo eqinileyo, yexesha elide.